Irubber (yokulungisa iikhampasi)
Irabha isetyenziselwa ikakhulu ukulungisa imibhobho, iihoses kunye neentambo.
I-Mini clamp inamandla okuqina okubambelela ukufakwa ngokulula kwaye ilungele iihoses ezincinci ezinqatyisiweyo ezibiyile ngaphezulu kweplaers ezingenazilo.
Ubunzima bombhobho we-duy enzima nerabha
Ubunzima bombhobho we-duy enzima kunye nerabha yindawo ekhethekileyo yokulungisa imibhobho emisiweyo.
Ucingo oluphindaphindiweyo lwe hose
I-wire hose clamp clamp ziyafumaneka kwizixhobo ezibini. Iidayimitha zocingo zahlukile ngokobungakanani. Ubungakanani obungadweliswanga kwitafile bunokwenziwa ngokwezifiso.
Iindlebe ezimbini ezivaliweyo
I-clutch-Double-clamp zenziwe ngokukodwa kwiibhubhu zensimbi ekumgangatho ophezulu, kwaye umphezulu uphathwa nge-zinc ekumgangatho ophezulu.Ukuqulunqwa komgangatho kunye nokukhanya okukhaphukhaphu kufuna indibano ye-caliper.
Ibhulorho ye-hose clamp
I-Bridge hose clamps yenzelwe ngokukodwa iintsimbi, ii-bellows ijikeleze ekhohlo nasekunene ukuze yenze itywina eligqibeleleyo lekhonkco isityu sombhobho.Ihose inokunxulunyaniswa nesembozo sothuli, umnyango wokuqhuma-ubungqina, isinxibelelanisi kunye nezinye izixhobo ukwenza indawo eqinileyo kunye Inkqubo yokuqokelela uthuli eyomeleleyo. Uyilo lwebhulorho luvumela amandla ukuba ahambe ngqo kwi-hose, ngokubeka ngokulula i-hose yesitywina esikhuselekileyo kunye nodibaniso. Ulwakhiwo lwensimbi engenasiseko ukuze luhlale luqinile.